စိတ်ဝင်စားစရာလေးပါ…. အသုံးတည့်မယ်ထင်ပါတယ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » စိတ်ဝင်စားစရာလေးပါ…. အသုံးတည့်မယ်ထင်ပါတယ်…
Posted by intro on Mar 27, 2010 in Other - Non Channelized |3comments
မှတ်ချက်။ ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပေးပို့သော Forward Mail မှတဆင့် ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ဘာလို့ ရယ်တာလဲ မေးရင် ရယ်ချင်လို့ ရယ်တာလို့ ဖြေလိုက်မယ်ခင်ဗျ။
ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ ဆေးပညာအမြင်အရပါ တိတိကျကျရေးထားတာ ဗဟုသုတရပါတယ်။